बनिनसक्दै केर्खा खोलाको पुल भत्कियो, त्यस्तो पुल कस्तो होला ? - Koshi Online
बनिनसक्दै केर्खा खोलाको पुल भत्कियो, त्यस्तो पुल कस्तो होला ?
असार २७, मोरङ, पथरीशनिश्चरे नगरपालिका वडा नं ८को केर्खा खोलाको पुल निमार्ण सम्पन्न हुन नपाउदै भत्किएको छ । कमसल निर्माण सामाग्रीको प्रयोग गरेर निर्माण समितिले बढी फाइदा खान खोज्दा बनिनसक्दै पुल भत्किएको हो ।
नगरपालिकाको ४० लाख र स्थानीय उपभोक्ताको ६ लाख गरी कूल ४६ लाखको बजेटमा सो पुल निर्माण गरिएको हो । मिलन चोकदेखि दोहलु शुक्रवारे पश्चिम जाने बाटोमा बनेको पुल सामान्य बाढीका कारण पुलको उत्तरपट्टिको भाँगमा रहेको पश्चिम साइडको पङखा भासिन पुगेको हो । बाटोको सतह देखिनै धरधरे लागेर सो पङखाको बाटो साइडको माटो बगाएपछि बाटोको सतहमा नै प्वाल परेर जादा पुलको साइडमा भ्वाङ् परेको छ ।
४६ लाखको कूल बजेट विनियोजन भएपनि ३९ लाखमा पुल बनेको हो । वडाका अध्यक्ष बावुराम दाहाल पुलको बिषयमा बोल्न चाँहेनन् । सामान्य बाढीकै कारण भत्कन थालेको सो पुलले जनप्रतिनिधि काम गर्न भन्दापनी सरकारी बजेटको दूरुपयोग गर्न उद्दत रहेको स्पस्ट भएको स्थानीय हरी पोखरेलको भनाई छ । वडा अध्यक्ष दाहाल सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । पटक–पटक फोन गर्दा समेत मोबाइल स्वीच अफ गरेर बसे । स्थानीयवासी कार्कीले भने, ‘राम्रो काम गरेको भए फोन उठाई हाल्थे नी’ ।